Misy lisitry ny toeram-pivoaran'ny lisitry ny lisitra ve mba tsy hilefitra?
Mazava ho azy, ny rehetra dia mila tranonkala mba hifanerasera amin'ireo loharanom-baovao hafa amin'ny aterineto ho an'ny laharana ambony ao amin'ny Google. Ny karazana vohikala sasany anefa dia tokony hialana amin'ny vidiny rehetra - mety hampidi-doza kokoa ny tranonkalanao izy ireo, fa tsy hanome vatsy tsara. Ary misy olana roa lehibe amin'ny dingana manontolo amin'ny Search Engine Optimization. Voalohany indrindra, tokony handinika ny lisitry ny lisitry ny toeram-pivoarana misy anao ianao - azonao atao ny manamarina izany amin'ny fampiasana ny Google Search Console. Ary eto izahay dia tonga amin'ny farany - tokony hahafantatra ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny tranonkalan'ny ratsy indrindra ianao miaraka amin'ireo safidy faratampony mba hahatonga anao ho sahirana rehefa mifampiraharaha amin'izy ireo.
Mampalahelo fa tsy misy fitaovana iray na vahaolana entina handraisana fanapahan-kevitra farany - dia mila mitsidika ny tranonkala tsirairay alohan'ny hanatsahana farany ny fifandraisana aminy. Raha ny marina, tokony ho afaka ny hanao ny fanombanana manokana ianao ary hanana fitsarà-kevitra farany ao anatin'ny 30 segondra eo ho eo. Ary tsy misy lisitry ny lisitry ny rohy ahafahana manampy anao amin'izany - na ireo tranonkala voatahiry ambony, na ireo faniriana tsara indrindra ho an'ny fanorenana rohy.
Ary mazava ho azy, tsy tokony handinika tsara ny tranonkala mifototra amin'ny fisehoany ivelany fotsiny ianao, na ny zavatra hafa rehetra nalaina irery. Tadidio fa misy tranonkala spammy maro no mijery ny tena izy, ary ny mifamadika amin'izany - loharanom-baovao tena lehibe ho an'ny fananganana rohy dia mety ho toy ny spam. Andao hiatrika izany indray mandeha - tsy misy lisitra backlink izay mety hanampy amin'izany. Fa izao no valiny - Manoro hevitra fotsiny aho fa ny zava-drehetra dia mety ho ampy hampifandraisana azy, afa-tsy amin'ireto manaraka ireto:
Resaka tsy voatambatra
Raha handeha ianao Ho adino amin'ny tranonkala na blôgy, izay manaporofo fa tsy voasokitra ao amin'ny Google, dia adino izany. Raha ny marina, dia efa ho 100% ny fiantohana fa ny loharanom-baovao toy izao dia efa voasazy amin'ny Google. Midika izany fa mila mampiasa matetika paikady tsy ara-dalàna sy hetsika manipulerina izy ireo mba hialana amin'ny google. Tsy ho tianao mihitsy ny tranonkalanao mba hananana ny laharana misy azy amin'izao fotoana izao, sa tsy izany? Tsy lazaina fa mety ho tonga any amin'ny toerana mahery toy ny fandrarana tanteraka ny fikarohana.
Pejy tsy misy fitokisana sy fahalemena
Jereo ireo kandidà rehetra tianao te hifaneraseranao amin'ny fampiasana fitaovana maimaim-poana amin'ny Internet mba hamantarana ny tena izy (page authority), DA (tompon'andraikitry ny sehatra), ary koa PR (pejy laharana). Raha toa ianao ka mahatsapa ny tsy fahampian'ny iray amin'ireo trano ireo farafaharatsiny, dia tsara kokoa ny misoroka ny fijerena ireo tranonkala ireo, farafaharatsiny ho an'ny tanjona fananganana rohy.
Mpiara-miady siramamy sy tranonkala fifandraisana
Midika izany fa ny tranonkala na ny tambajotra an-dàlam-pejy dia manambara fa manana kalitaony fivarotana - tokony havaozina amin'ny fotoana fohy. Angamba, efa nanangana sainam-bolo izy ireo ary Google dia tonga ho azy ireo - ireo tranonkala mahantra ireo sy ny mpanjifany tsy mendrika.
Ny tranokala na blôgy misy tsy manan-tsahala na tsy ampy
Ataovy azo antoka fa tsy hiatrika ireo tranokala na pejy miaraka amin'ny votoaty tena tsy dia tsara loatra, miaraka amin'ny kely na tsy misy afa-po. Aza misalasala manapa-kevitra sasantsasany ao amin'ny votoatin-pejy ao anaty random ary mameno azy ao amin'ny bar of Google. Ny mahazatra indrindra, ny loharanon-karena toy ny fanakanana na ny duplicate ny votoaty dia tsy misy afa-tsy ny mpanamory na farafaharatsiny mivarotra ny rohy malemy ratsy izay mety ho tohodrano amin'ny tranokalanao, saika amin'ny toe-javatra rehetra Source .